Ma laga yaabaa in finalka koobka Afrika la arko markii seddaxaad labo kooxood oo Carbeed?… – Hagaag.com
Posted on 14 Luulyo 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
African Cup of Nations oo ay martigelisay Egypt, ayaa gaaray qeybihii ugu dambeeyey ka dib markii uu dhamaaday wareega quarter-finalka tartanka oo hadda afar kooxood u soo baxay semi-finalka oo kala ah: Senegal, Nigeria, Algeria iyo Tunisia.
Wareegii quarter-final-ka ee tartanka waxaa la qabtay Arbacadii iyo Khamiistii ee la soo dhaafay, halkaas oo Senegal ku dardartay Benin 1-0, Nigeria ayaa 2-1 kaga badisay South Africa, Algeria oo Ivory Coast ku martay gool ku laadka 4-3, Tunisia ayaa kooxda Madagascar isaga reebtay 3-0.
Ciyaaraha Semi-finalka ayaa lagu wadaa inay dhacaan Axadda maanta ah, iyadoo Tunisia ay la ciyaareyso Senegal oo ay ka dhici doonto garoonka ciidamada difaaca cirka, ka dibna waxaa kulmi doona Algeria iyo Nigeria oo ku ciyaari doona garoonka kubada cagta ee Qaahira ee dowliga.
Kooxaha Tunisia iyo Algeria ayaa haysta taageerayaasha Carabta ee tartanka koobka Afrika ka dib markii ay u soo baxeen semi-finalka.
Waxaa dhici karta in finalka koobka la daawado laba kooxood oo ka soo jeeda carabta markii seddaxaad taariikhda kubada cagta Afrika, haddii kooxda Tunisa ka badiso Senegal iyo haddii Algeria ka badiso Nigeria, markaasi waxy noqon doontaa in finalka ay isku arkaan labo kooxood oo Carbeed maalinta Jimcaha ee soo socota iyo garoonka kubada cagta ee Qaahira ee dowliga ah.
Markii ugu horeysay ee dhacday in labo kooxood oo Carbeed isugu soo haraan finalka koobka Afrika waxay aheyd sanadkii 1959 oo ciyaaraha ay ka dhaceen dalka Masar oo ku kulmay Masar oo martigelineysay iyo Sudan, waxaana halkaasi ku badiyey Masaarida 2-1.
Markii labaad oo la arko labo kooxood oo Carab ah finalka ku kulmaan ayaa aheyd sanadkii 2004 oo tartanka lagu qabtay dalka Tunisia, waxaana finalka isugu soo haray Tunisia iyo Morocco, waxaana guusha raacday Tunisia oo ku badisay 2-1.